Horudhac: Chelsea vs Southampton… (The Blues oo soo dhoweynaysa Kooxda Saints oo ay hal dhibic ka sarreyso) – Gool FM
Horudhac: Chelsea vs Southampton… (The Blues oo soo dhoweynaysa Kooxda Saints oo ay hal dhibic ka sarreyso)
(London) 17 Okt 2020. Chelsea ayaa kooxda Southampton ku soo dhoweynaysa garoonkeeda Stamford Bridge galabta oo Sabti ah kulan qeyb ka ah horyaalka Premier League, kaddib markii laga soo laabtay ciyaaraha heerka caalami.
Labadaan kooxood ayaa kaliya waxaa u dhexeysa farqi hal dhibic ah kaddib afar kulan oo la ciyaaray horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan.
Garsooraha: Robert Jones (England)
Ciyaaryahanka Chelsea ee Ben Chilwell ayaa taam ah inkastoo uu ka soo laga soo saaray waajibaadka xulka England, laakiin Edouard Mendy ayaa maqnaanaya kaddib markii uu dhaawac ka soo gaaray bowdada intii lagu guda jiray tababarka xulkiisa Senegal.
Thiago Silva ayaa la nasin doonaa, halka Christian Pulisic iyo Hakim Ziyech ay labadoodaba ciyaari karaan, iyadoo kan dambe ee Ziyech ah illaa daqiiqadda ugu dambeysa go’aan laga gaari doono haddii uu dheeli karayo.
Dhinaca kale Theo Walcott ayaa safan kara kulankiisii ugu horreeyey ee Southampton tan iyo sanadkii 2006 kaddib markii uu kooxda heshiis amaah ah ugu soo biiray.
Saxiixa kale ee cusub Ibrahima Diallo ayaa isaguna diyaar u ah inuu safto kulankiisii ugu horreeyey ee Southampton.
Moussa Djenepo iyo Mohammed Salisu ayaa labaduba maqnaan doona, halka Stuart Armstrong la tix gelin doono kaddib markii uu ka soo laabtay xaalad karaantiil ah oo uu ku jiray maadaama laga helay Korona Fayras.
>- Kooxda Chelsea ayaa guuldarro 2-0 kala kulantay garoonkeeda Southampton xilli ciyaareedkii hore, laakiin waxa ay guuleysteen todobo ka mid ah sagaalkii kulan ee la soo dhaafay oo ay horyaalka ku wajaheen, labada kulan ee kalena hal barbaro iyo hal guuldarro ayay ku dhammaadeen.
>- Kooxda Southampton ayaa laga yaabaa inay rikoor guulo isku xiga horyaalka kaga gaarto Blues garoonka Stamford Bridge markii ugu horreysay tan iyo sanadkii 1985-kii.
>- Chelsea ayaan garoonkeeda gool looga dhalin horyaalka Premier League marka ay wajahayso kooxda ka hooseeya lixda kaalin ee sare tan iyo markii markii ay guuldarro 2-0 ah kala kulmeen Southampton bishii December.
>- Blues ayaa badisay 7 ka mid ah siddeedii kulan ee ugu dambeysay ee ay ku ciyaartay garoonka Stamford Bridge, iyadoo wadar ahaan dhalisay 18 gool, waxaana laga dhaliyay kaliya afar gool.
>- Waxa laga yaabaa inay Chelsea shabaqa ilaashadaan kulamada isku xigxiga oo horyaalka ah markii ugu horreysay inta ay ka hoos ciyaarayaan Tababare Frank Lampard.
>- Olivier Giroud ayaa dhaliyay toddobo gool oo horyaalka ah kulammadii uu ka horyimid kooxda Southampton, iyadoo mid kasta oo ka mid ah afartii kulan ee ugu dambeysay uu bedel ku yimid – ciyaaryahanka kaliya ee shan gool ka dhaliyay Premier League koox gaar ah oo ka soo horjeedda isagoo ka soo kacay kursiga keydka waa Julian Joachim oo sidaasi ku sameeyey kooxda Derby.
>- Southampton ayaa adkaan karta saddex kulan oo isku xigta oo horyaalka ah markii ugu horreysay tan iyo markii ay badiyeen afartii kulan ee ugu danbeysay xilli ciyaareedkii 2015-16, markaasoo uu kooxda hoggaaminayay Macallin Ronald Koeman.
>- Waxay sidoo kale sameyn karaan saddex jeer oo isku xigta inay kulammada sare shabaqooda gool ka ilaashadaan, iyadoo markii ugu dambeysay oo ay sidaasi sameeyaan ay ahayd intii u dhaxeysay bilihii September iyo October ee sanadkii 2016.
>- Saints ayaa soo uruursatay 20 dhibcood oo ay ku soo ciyaartay meel ka baxsan garoonkooda sanadka 2020 – kaliya Liverpool ayaana ka fiican.
>- Danny Ings ayaa dhalieyy 13 gool oo Premier league ah sanadkan 2020, wadar ahaan waxaa ka sarreeyay oo kaliya Mohamed Salah.
Horudhac: Everton vs Liverpool… (Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulanka Merseyside Derby ee maanta ka dhacaya garoonka Goodison Park)